China GD-KB-S002 ： Baby stroller, light stroller, stroller for baby, comfartable stroller for baby, mma nwa stroller ụlọ ọrụ na ndị na-emepụta | GUODA
GD-KB-S002 ： Baby stroller, light stroller, stroller for baby, comfartable strolller for baby, mma nwa stroller
Onye na-agba ọsọ a bụ ngwakọta zuru oke nke ezigbo mma yana ọnụ ahịa nwere ezi uche. Mgbe ị chọrọ ịzụ stroller, GUODA nwere ike ịbụ nhọrọ kachasị mma gị.
1. Nnukwu nkata nchekwa ahụ nwere ike ịnabata ọtụtụ ihe ụmụaka na-apụ.
2.Eduzi edozi, nke mere na nwa ahụ nwere ike ịnọdụ ma ọ bụ dinara ala, ọ nwere ike ịbụ oche ma ọ bụ obere akwa. Enwere ike idozi ya site na 100 Celsius ruo 180 Celsius. Can nwere ike ịkpọrọ nwa gị pụọ ma nwee ọ enjoyụ na ntụrụndụ gị. Kwee ka nwa gị hie ụra mgbe ọ bụla ọ chọrọ.
3. Mpempe nchekwa nchekwa ise nwere nchekwa ma nwee ntụkwasị obi.
4. Ọ dị nfe ịpịkọta stroller, naanị otu pịa.
5. EVA taya bụ mgbawa na-egbochi mgbochi mgbapu na ike mgbochi eyi ike. na ọ dịghị mkpa ka ịfụba taya. 4 taya na wuru na-nkwusioru mmiri nwere ike banye ujo.
6. Obere apịaji size na stroller nwere ike iji na ụgbọelu.
7. Ogwe aka n'ihu dị na mbughari.
930 * 600 * 1020
Anya n'etiti wheel na azụ
520 * 230 * 760
N. ibu ibu
G. ibu ibu
Nke gara aga: GD-KB-S001 ： Lightweight Baby Stroller, njem usoro, mma nwa stroller, multifuctional nwa stroller
Osote: GD-KB-B001 ：'mụaka itule bike, ụmụaka itule bike, ụmụaka bike, yi itule bike, obere igwe kwụ otu ebe maka ụmụaka, ụmụaka bike enweghị pedal
Companylọ ọrụ anyị na-etinye aka n'ịmepụta ihe nchekwa dị mma ma dị mma maka ndị nne na nna si n'akụkụ ụwa niile. Anyị na-emegide ụmụaka nwere nkwarụ na ndị nwere nkwarụ bụ ndị na-eyi nchekwa nchekwa ụmụaka egwu. Mgbe ị chọrọ ịzụ stroller, GUODA nwere ike ịbụ nhọrọ kachasị mma gị.
Ihe eji eme ihe bu ihe eji eme ihe na aka nke nwere ike idobe nwa ma obu nwatakiri n'ihi na ihe nkasi obi, onye na-agagharị agagharị nwere ike inyere nwa aka ihi ura, n'ihi na o nwere ike inye ebe di nma ma di nma ka umuaka zuru ike. Stroller nwere ike ịnye ọrụ bara uru n'ime ụlọ yana n'okporo ámá ma ọ bụ n'ogige ntụrụndụ.
Alloy ụba Baby Stroller
comfartable strolller maka nwa
Dlegba okpokoro nwa
Kpakọba Baby stroller
Kacha ọhụrụ na Baby Stroller
mma nwa strolla
mma stroller maka nwa
Onye na-agba ọsọ na China
Onye na-agba ọsọ maka nwa